जीवनशैली अभिलेखागार - स्मार्टमे
डोम » "जीवनशैली" कोटि द्वारा अभिलेख
FIAT F500 F10 CROSS e-स्कूटरको प्रीमियर अद्भुत टायरको साथ
fiat 500, स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर
CROSS संस्करणमा FIAT 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रमाणित र हाल लोकप्रिय F500 F10 मोडेलको नयाँ संस्करण हो। आधारभूत मोडेलको विपरित, यसमा २. inch इन्च टायरसहित १० इन्च पा whe्ग्रा छन्, जुन "हनीकम्ब" टेक्नोलोजीसँग बनेको छ,
हनर ब्यान्ड 6. को ग्लोबल संस्करणको प्रीमियर। हामी मूल्य जान्दछौं
सम्मान, सम्मान ब्यान्ड, सम्मान ब्यान्ड।, स्मार्टब्यान्ड
चिनियाँ ब्रान्डले विश्वव्यापी बजारमा आफ्नो स्मार्ट ब्यान्ड होनर ब्यान्ड the सुरू गर्ने घोषणा गर्‍यो। उपकरणको प्रस्तुतीकरण गत वर्ष नोभेम्बरमा भयो, तर आधिकारिक रूपमा यो मध्य राज्यमा मात्र किन्न सकिन्छ। नयाँ स्मार्ट ब्यान्ड विशेषताहरु ...
एक लचिलो स्क्रीन संग एप्पल वाच? किन होइन!
स्याऊ, स्याउ घडी, प्याटेन्ट, स्मार्ट घडी
भर्खरका रिपोर्टहरू र प्याटेन्ट अनुप्रयोगहरूका अनुसार, एप्पलले आफ्नो स्मार्ट वाचको उपस्थितिमा आमूल परिवर्तनको संभावनालाई विचार गरिरहेको छ। क्रान्तिले अन्य चीजहरूको बीचमा, खामको आकार परिवर्तन गर्ने र लचिलो पर्दा प्रस्तुत गर्ने काम समावेश गर्दछ। म्याक्रोमर्सले खुलासा गरे कि एप्पलले उपयुक्त रिपोर्ट गरेका छन् ...
POCO ले दुई प्रमुख फोन सुरू गर्यो
हिजो, नयाँ POCO स्मार्टफोन प्रस्तुत गरिएको थियो - POCO F3 र POCO X3 Pro। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870० G जी मोबाइल प्लेटफार्म प्रोसेसरबाट सुसज्जित, POCO F5 सँग 3..6,67 इन्च AMOLED E4 DotDisplay छ १२० सम्म ताजा दर संग ...